ချစ်ရအောင်: ဘလော့ Template အသစ်ထည့်နည်း
ဒါကတော့ ဘလော့ တက်ပလက် ချိန်းနည်းလေးပါ..အရင်ကလည်း တင်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်.. ခုဘလော့တွေမှာ ဘလော့ကာ စတိုင်က ပြောင်းလဲနေတော့ မျက်စိလည်ကုန်ကြတာပါ..အရင် စတိုင်အဟောင်းနဲ့ တုန်းကသုံးရတာ အရမ်းလွယ်ကူပြီး ရှင်းနေတာဘဲလေ ခု ဒါနဲ့ကျတော့ တမျိုးဖြစ်နေကြပါတယ်... ဒါလေးကလဲ မသိသူရှားပါတယ်.. ဒါပေမယ့် တောင်းဆိုထားတဲ့သူအတွက် ထပ်မံတင်ပြလိုက်ရတာပါ..သိသူတွေအတွက်တော့ ကျော်သွားလိုက်ပါနော်..
31 Oct 12, 04:07 PM
စိုင်းနော်လျန်းဖ: Template Designer. ပြောင်းနည်းလည်း ခုပုံ.စံသစ်ဖြစ်ပြီးတော. ဘယ်နေရာမှာ သွား Update နေရာ ကို မတွေ.ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ အေဟာာင်းတော. လုပ်နည်းသိပ်ါတယ် ခုတော. မသိတော.ဘူးဗျာထပ်ပြီးရှင်းပြပါနော်
အဆင့် (၁)...... အနေနဲ့ ဘေလာ့ကာ ၀င်လိုက်ပါနော်...
ဘလော့ကာ မှတဆင့် Template ဆိုတာကို ကလစ်ဝင်လိုက်ပါ...
အဆင့် (၂) ........အနေနဲ့ကတော့ အောက်ကပုံကို ကြည့်ပါ။
အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ Backup/ Restore ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ပါ။
အဆင့် (၃).........ကတော့ အောက်မှာဆက်ကြည့်ပါနော်...
သည်နေရာမှာ Download full Template ဆိုတာလေးက မိမိတို့ အဟောင်းကိုပြန်လည် ဒေါင်းယူထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်...ကလ်စပြီးဒေါင်းလိုက်တာနဲ့ xml ဖိုင်လေးတစ်ခု ရမှာပါ..သိမ်းထားလိုက်ပေါ့...လိုအပ်ရင် အဟောင်းကိုပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။
Browse ဆိုတာကိုကလစ်တာနဲ့ မိမိတို့ ပြောင်းလဲ အစားထိုးလိုတဲ့ တက်ကလက် အသစ်ရဲ့ xml ဖိုင်ဆီကိုအရောက်သွားပြီး ရွေးပေးလိုက်ပါ...ပြီးတာနဲ့ အသစ်ဖိုင်လေးကို ထည့်ပေးလိုကပေါ့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Upload ဆိုတာကလစ်လိုက်ပါ...ခဏကြာတာနဲ့ မိမိတို့ဘလော့ရဲ့ တက်ပလက် ဒီဇိုင်းဟာ အသစ်တိုင်း ပြောင်းလဲနေပါပြီ....
မှတ်ချက် ။ ။ တက်ပလက် အသစ်တွေကို ဒေါင်းယူနည်းနဲ့ xml ယူနည်းတွေကို နားမလည်သေးသူရှိပါက C-Box မှာစာချန်ပြီးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်...
အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက...
ဒီနည်းပညာက အိမ်တလုံးကို ပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့စနစ်တကျ တည်ဆောက်ပြနေသလို ပရိဘောကအစုံအလင်ကို လက်ဆောင်ပေးသလားမှတ်ရပါတယ် ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါ။
အောင် ကျော် သူ said...
အခုမှတွေ့တယ် အကို ညီလေးတော့ဒီနည်းတိုင်းစမ်းကြည့်လိုက်ပြီအဆင်ပြေသွားပြီအကိုရေ ကျေးဇူးပဲ နည်းပညာများများမျှဝေနိုင်ပါစေအကို ဘလော့ခရီးသည်